पुरानो नेपाली फिल्मको झल्को दिने अंकितबाबु र सुनिताको 'बिनायो भाकैले' (भिडिओ) :: सेतोपाटी संवाददाता :: Setopati
काठमाडौं, कार्तिक ४
अंकितबाबु अधिकारीको संगीतमा सार्वजनिक 'के माया लाग्छ र!' बोलको गीत गत वर्ष लोकप्रिय भएको थियो। स्रोताले लोकशैलीको संगीत रुचाएपछि गायक तथा संगीतकार पछिल्लो समय यही विधाका गीत-संगीत बनाउन सक्रिय देखिएका छन्।
'के माया लाग्छ र'मा संगीत मात्र दिएका उनले त्यसपछि आफ्नै स्वर तथा संगीतमा लोकशैलीकै गीत 'याक्थुङ्मा कान्छी' ल्याए। याक्थुङ्मा कान्छी अंकितले गायिका सुनिता थेगिमसँग मिलेर गाएका थिए।
हालै अंकितले आफ्नै संगीतमा गायिका सुनितासँगै अर्को लोकशैलीको गीत सार्वजनिक गरेका छन्। सुष्मा सिग्देलको रचनामा 'बिनायो भाकैले' बोलको गीतमा पनि अंकितले लोकभाकालाई नै रोजेका छन्।
बिनायो भाकैलेको म्युजिक भिडिओ 'तीनपाते', 'के माया लाग्छ र!', 'लजाएर', 'बाफ'जस्ता भिडिओ निर्देशन गरिसकेका नवीन चौहानले गरेका हुन्।
'हामी धेरैसँग पुराना नेपाली फिल्म हेर्दाका स्मृति छन्। ती स्मृतिमा खास किसिमको पात्र, परिवेश र पहिरनपनि आउँछन्। खास किसिमका घटनाक्रम र प्रस्तुति नै त्यसबेलाको फिल्मको पहिचान पनि थियो,' निर्देशक नवीनले सेतोपाटीसँग भिडि‌ओबारे भने, 'म पनि धेरै नेपाली फिल्म हेर्दाहेर्दै निर्देशनमा लागेकोले त्यो समयको झलक दिने खालको भिडिओ बनाइएको हो।'
प्रकाशित मिति: बिहीबार, कात्तिक ४, २०७८, ०२:३५:५४